विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने अमेजनका मालिक, कति हाेला उनकाे सम्पति ? – Nepal Journal
विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने अमेजनका मालिक, कति हाेला उनकाे सम्पति ?
Posted By: Nepal Journal January 11, 2018 | २७ पुष २०७४, बिहीबार १७:१०
एजेन्सी । पुस २७ । अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस १०५.१ अर्ब डलरका साथ हालसम्मको सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका छन् । बेजोसको सम्पत्तिले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको सम्पत्तिको रेकर्डलाई तोडिदिएको छ ।
बेजोसले गत अक्टोबर महिनामा नै सबैभन्दा धनी मानिएका बिल गेट्सलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा आफ्नो स्थान बनाएका थिए । उनको त्यसबेलाको कुल सम्पत्ति ९३.८ मिलियन डलर पुगेको थियो ।
३१ बर्षीया बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट सार्वजनिक गरेसँगै सन् १९८७ मा विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरमा नै अरबपतिको सूचीमा सामेल भएका थिए । त्यस्तै सन् १९९५ मा ३९ बर्षको उमेरमा नै उनी विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा छानिएका थिए । त्यसबेला उनको कुल सम्पत्ति १२.९ बिलियन डलर रहेको थियो ।
बेजोसको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा अमेजनबाट आएको छ । अमेजनमा रहेको उनको सेयर संख्या ७ करोड ८९ लाख रहेको छ । सोमबार अमेजनको सेयरको मूल्यमा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो वृद्धिसँगै उनको कुल सम्पत्तिमा १.४ अर्ब डलरको वृद्धि भएको थियो ।
यो वर्षको हालसम्मको अवधिमा अमेजनको सेयरमा झन्डै ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । गत वर्ष फर्मको सेयरमा ५६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो ।
फोब्र्सले गेट्सको सम्पत्ति १९९९ को अप्रिलमा १०० अर्ब भन्दा थोरै माथि भएको जनाएको थियो । मुद्रास्फीर्तिको समायोजन गरेर हेर्ने हो भने उनको त्यति बेलाको सम्पती १४८ अर्ब डलर हुन आउँछ ।
सन् २०१८ को मार्चमा फोब्र्सले विश्वका धनी व्यक्तिहरुका सूची सार्वजनिक गर्नेछ । अमेजनको शेयर मूल्यमा गिरावट नआएसम्म उसँग सबैभन्दा बढी नेटवर्थ हुनेछ ।
Be the first to comment on "विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने अमेजनका मालिक, कति हाेला उनकाे सम्पति ?"